Mombamomba ny orinasa - Shenzhen Antmed Co., Ltd.
Ny Shenzhen Antmed Co., Ltd. dia misahana manokana amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy fitaovana ara-pitsaboana efa mandroso, izay vokatra manarona sary, fitsaboana amin'ny fo sy aretin-kozatra ary peripheraly dia kely indrindra, fanatoranana, fikarakarana mafy ary departemanta hafa.
ANTMED dia mpitarika tsena anatiny ao amin'ny sehatry ny indostria sy ny indostrian'ny Disposable Pressure Transducers. Manome vahaolana tokana an'ny CT, MRI ary ny DSA fampidirana tsindrona, fanjifana ary kateter IV tsindry. Ny vokatray dia amidy any amin'ny firenena maherin'ny 100 sy ny faritra toa an'i Amerika, Eropa, Azia, Oceania ary Afrika.
Tamin'ny fanerena ny fitsipiky ny "Quality is Life", Antmed dia nanangana ny rafitra fitantanana kalitao mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny EN ISO 13485: 2016, 21 CFR 820 ary ny fitsipika mifandraika amin'izany avy amin'ny mpikambana Multi Device Single Audit Procedure (MDSAP). Ny orinasantsika dia nahazo ny mari-pahaizana EN ISO 13485 QMS, ny mari-pahaizana MDSAP ary ny serivisy fanamafisam-peo ISO 11135 Ethylene oxide ho an'ny mari-pahaizana momba ny fitsaboana; nahazo fisoratana anarana ihany koa izahay an'ny USA FDA (510K), Canada MDL, Brazil ANVISA, Australia TGA, Russia RNZ, Korea Atsimo KFDA ary firenena hafa. Nahazo mari-pankasitrahana isan-taona ny antmed credit class-mpanamboatra fitaovana fitsaboana any amin'ny faritanin'i Guangdong mandritra ny enin-taona misesy.
ANTMED dia ny National Hi-Tech Enterprise manana fahaiza-manao matanjaka amin'ny fampivoarana ny vokatra, ny famokarana bobongolo, ny famokarana lehibe, ny tambajotra varotra anatiny sy iraisam-pirenena mahomby, ary manome serivisy fanampiny ho an'ny mpanjifa. Reharehantsika ny zava-bitanay ary ezahinay ny handray anjara mavitrika amin'ny fanavaozana ara-pitsaboana an'i Shina sy ny fanatontoloana ny indostrian'ny orinasa mpamokatra afovoany farany ambony. Tanjona akaiky an'i ANTMED dia ny hitarika amin'ny indostrian'ny sary tsy fitoviana eran-tany, ary ny vina maharitra dia ny orinasa hajaina manerantany amin'ny indostrian'ny fitaovana fitsaboana.
Ho orinasa hajaina manerantany amin'ny indostrian'ny fitaovana fitsaboana.
Mifantoha amin'ny fanavaozana vokatra farany tsara amin'ny fitsaboana.
Ho orinasa iray etika sy tompon'andraikitra izay hanome lanja ireo mpiasanay ary hitombo miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminay.
Mametraha QMS-centric ho an'ny mpanjifa hanome vokatra sy serivisy avo lenta.